जिउँदो दाहिने शंख देख्नेहरुको भाग्य चम्किने जनविश्वास, पढेर से-यर गरौं ! – ताजा समाचार
जिउँदो दाहिने शंख देख्नेहरुको भाग्य चम्किने जनविश्वास, पढेर से-यर गरौं !
धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ । शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ । लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ ।
हिन्दू धर्ममा प्रयोग
रामायण, महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ । शंख महाभारतमा वर्णित एक राजा विराटको एक पुत्रको नाम पनि थियो।
औषधीका रूपमा प्रयोग
आयुर्वेद उपचारमा शंखको ठूलो महत्त्व छ । शंख बनाउन शंखलाई माटोको भाँडोमा राखेर पाँच/छ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ ।
यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् । शंख अम्लपित्त, अनुहारको चाया, डण्डीफोर र खत हटाउन उपयोगी हुन्छ ।
अनिद्राको बिरामीलाई कानमा दुइटा शंख राख्दा समुद्री लहरको कर्णप्रिय आनन्दले निन्द्रा लगाउँछ भने शंख जलले मुख धुँदा अनुहार उज्यालो हुन्छ ।
र यहाँ हामीले एक स्वास्थ्य सम्वन्धि जानकारीमुलक भिडियो राखेका छौं । एकचोटी भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला । भिडियो मन परेमा । शेयर गर्न नभुल्नुहोला ।